Himalaya Dainik » यदि सरले मलाई बिहे गरेकाे भए म करणीको ‘मुद्दा’ लगाउने थिइन्
कसरी भएकाे थियाे घटना?
पी’डित सपना (परिवर्तित नाम) बागचाैर नगरपालिका २ निवासी हुन् भने शिक्षक रामचन्द्र केसी पनि साेहि वडा बासी हुन् । केसीले बागचाैरमै ब्राइट रोजल्याण्ड बोर्डिङ स्कुल संचालन गरिरहेका थिए र उनि बाेर्डिङका एमडी हुन् भने सपनाले साेहि स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्थिन् ।
याै न प्रस्तावकाे सुरु कहाँबाट भयाे?
‘बाइकमा सर र म सँगै गयाैं । बाटाेमा सरले एउटा हातले हेन्डिल समाउनु हुन्थ्याे, अर्काे हातले पछाडी मेराे घुँडा समाउनु हुन्थ्याे ।
कसरी बाहिरियाे ब ला’त्कारकाे कुरा?
पछिल्लाे पटक काेराेनाकाे कारण भएकाे लकडाउनमा रामचन्द्र र सपनाकाे खासै भेट हुन सकेन् । तर उनिहरु बीच पहिले देखिनै शा रिरिक स म्बन्ध भएकाे थियाे । त्यहि कारण सपनाकाे पेटमा दुइ महिनाकाे बच्चा बसिसकेछ । त्यसपछि दुवैमा त नाव श्रृजना उत्पन्न भयाे ।
बिहे गरेकाे भए घ’टना प्रहरीमा जाने थिएन?
सपना र रामचन्द्रकाे सम्बन्धकाे बारेमा घरमा सबैलाइ थाहा भएपछि याे खबर सुरुमा रामचन्द्र कहाँ पनि पुग्याे । सुरुमा रामचन्द्रले आफुले केहि नगरेकाे याे सब आफ्नाे फेसबुक आइडी कसैले ह्या क गरेर लेखेकाे बताए ।
सपना भन्छिन्, ‘म सरलाइ धेरै माया गर्थाे । यदि सरले मलाइ बिहे गरेकाे भए म मु’द्दा दर्ता गर्ने थिइन् । सरले मलाइ बिहे गर्दिन भनेपछि मात्रै मैले उ’जुरी दिएकी हुँ । हाम्राे सम्बन्धकाे बारेमा घर परिवारले थाहा नपाएकाे भए सायद हाम्राे सम्बन्ध लामाे समयसम्म भैरहन्थ्याे हाेला ।’
खकेन्द्र केसी ले तयार पार्नुभएको सामाग्री हामीले लेकाली अनलाईनबाट लिएका हौ।
यो पनि पढाैँ- किशोरीको उद्धार, आ-रोपित पक्राउ
हाल उनलाइ प्रहरीले उद्धार गरेको छ। ती किशोरीलाई विद्यालयमै पढाउने शिक्षक र अहिले गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले पटक पटक बला-त्कार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
किशोरीलाई शिक्षक खडकबहादुर बोहरा, गाउँपालिकामा कार्यरत केशव बोहरा र स्थानीय रामसिंह बोहराले पटकपटक ब ल त्कार गरेको आरोप लागेको छ। आ रोपित मध्ये खडक र रामसिंह बोहरालाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक गौरीप्रसाद जैशीले जानकारी दिए। आरो पित अर्का एकजनाको खोजी भईरहेको उनले बताए।
किशोरीलाई ललाईफकाई गरेर कर णी भएको भएपनि कानुन अनुसार कारवाही हुने प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले बताए।
सुशान्त मृत्यु प्रकरणले लियो नयाँ मोडः उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती पक्राउ
पोखरामा कोरोनाले ७३ वर्षीया महिलाको मृत्यु
शिल्पादेखि दीपासम्मः जो आफ्नै बोलीका कारण विवादमा तानिए
नेपाली युवती रितुको भारतमा लोभ लाग्दो सफलता
नारायणको ‘शव’- प्रेमको भन्दै ‘दाहसंस्कार’ गरिदिएपछि…
बलिउडका सबैभन्दा धनि यी ५ सुपरस्टार
श्रीदेवीको आँखा यस कारण हेर्नै सक्दैनथे आमिर खान
किशोरीको काँधमा ५ बहिनीको जिम्मेवारी !
म्याच फिक्सिङ प्रकरण: खेल मिलेमतोमा नखेलेको ठहर, खेलाडीले पाए सफाइ
तीन वर्षपछि खुल्यो जग्गाको ‘कित्ताकाट’
नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’ सस्तो मूल्यमा आउँदै
….त्यसपछि मिल्ने साथीले नै ‘मारे’
पोखरामा निषेधाज्ञा एक हप्ता थपियो